Hassan Joho Oo Ku Eedeeyay Madaxweyne Uhuru iyo Ruto Sumcadiisa In Ay Xumaynayaan – Radio KeyFM
Home / Somali Language / Hassan Joho Oo Ku Eedeeyay Madaxweyne Uhuru iyo Ruto Sumcadiisa In Ay Xumaynayaan
Hassan Joho Oo Ku Eedeeyay Madaxweyne Uhuru iyo Ruto Sumcadiisa In Ay Xumaynayaan
admin 8th February 2017	Somali Language Leave a comment 157 Views
Booliska oo laga dalbay soo xiritaanka Nin gabar yar ku kufsaday Garissa
Cali Roba iyo Xasan Nuur oo lagu amray inay bixiyaan Ganaaxa Rabshadihii Mandera ka dhacay
Gubarnatooraha kowntiga Mombasa Hassan Ali Joho ayaa iska fogeeyay in uu ku lug leeyahay ka ganacsiga daroogada,waxa uu sheegey olalaha Jubilee ee ay wado ugu magac dartay la dagaalanka madaxda daroogada in aysan daacad ka aheyn balse ay ku doonaayan in ay u adeegsadan ka hor istaagidiisa in dib loo soo doorto.
Isago hadalka sii wata Hassan Joho ayuu xusay dowlada hadii cadeeymo heyso ma aayan aadeen warbaahinta. Mar sii horeeysey madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa sheegey in ay qaadeen talaabooyin ay uga hortagayaan kuna baacsanayaan kuwa ka ganacsada daroogada wuxuuna ku tilmaamey kawantiga Mombasa in ay tahay xarunta daroogada.
Hadalka kasoo yeeray madaxweynaha ayaa Joho uu gaashaanka u daruuray, waxaana uu sheegey madaxweynaha in ay masuliyad ka saarantahay ilaalinta xuduudaha daqlka,ka warqabida waxa soo gala iyo waxa ka baxa .
Dhanka kale sharci dajiyayaal ka tirsan barlamaanka hoose ee kawntiga Mombasa ayaa ku eedeeyey dowlada in ay siyaasadeeynayso la dagaalanka daroogada , xildhibaanada kala ah wakiilka haweenka kowntiga Mishi Mboko, Abduwlsamad Nasir iyo Rashid Bendzima ayaa sheegey laamaha amaanka in ay ka jiifaan arinka la xariira la dagaalka daroogada.
Abdulsamad ayaa su’aal giliyay dhaqaalaha lagu bixiyo laamaha amaanka mar hadii aysan awoodin in ay baaritaano sameeyaan oo ay cadeeyn keenaan.
Previous DHAGAYSO : Masuuliyiin Booqday Suuqii Gubtay ee Xagardheere
Next FGM Oo Dhibaato Ku Haya Hooyada iyo Dhalaanka
Fred Matiang’I oo u xaqiijiyay Kenyan-ka in doorashada ay ku dhacayso Nabad
Sii hayaha wasiirka amniga gudaha Fred Matiang’I ayaa u sheegay Kenyan-ka in ciidamo ku filan …